AKHRISO:Fasahaadka Fanaaniinta Da’da yar ee ku Qul-qulaya Muqdisho!! | Wardaye Online
AKHRISO:Fasahaadka Fanaaniinta Da’da yar ee ku Qul-qulaya Muqdisho!!
Published on June 22, 2017 by war · No Comments
Magaalada Muqdisho ayaa ah goob ay fasahaad badan ku soo bandhigaan fanaaniin la sheegay in ay da’ yar yihiin.
Bandhigyadooda fanka ayaa buuxdhaafiya idaacadaha waqti ay Ciida Soon Fur taasi oo diini ahaan ay waajib tahay in Shanqarta fasahaadka iyo bandhigyada ay noqdaan kuwo saameyn yar.
Balse fanaaniin badamkood heesaga ka xaday kuwii berisamaadkii ayaa telefishinnada iyo raadiyeyaasha buuxdhaafiya.
Haba ugu darnaadaan kuwa ku soo indho furtay Qurbaha e’ eaxaa la arkayaa iyagoo ku soo qulqulaya.
Ma jiraan weli goobo ay si toos ah bandhigooda ugu soon bareeri karaan waxaana aroosyada laga dheehan karaa fudeyd dhallin aad u yar oo fasahaad xun soo bandhiga, tani oo soo jiidata indhaha kuwa shacabka qarxiya iyo argagixisada oo waxyeello shacabka gaarsiiya.
Fanaaniintii ugu dambeysay ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Cabdi Holand iyo Cabdi Wahaab Booska.
Fanaaniinta Iidle Yare iyo Iqra Yarey ayaa iyagana soo gaaray Magaalada Muqdisho maalmo ka hor, iyaga oo qorshahooda uu yahay in magaalada ay ku qabtaan Bandhig Faneed.
Dadweynaha dalku weli ma heystaan heykal dowladnimo buuxda iyo dhismeyaal dalxiis, soda xeradii xanaanada duur-joogta ee loo dalxiisi jirey.
Dhinaca kale, midnimo xumo ayaa indhaha fanaaniinta yar yar laga dareemi karaa iyadoo qaarkoodna aysan ku laaban karon goobihii ay ka yimaadeen kadib markii la xadiday fankooda, tusaale waxaa u ah Yurub Geenyo iyo Nimcaan Hillaac oo weli ku xaniban Muqdisho.
Walow sheekada fanaaniinta iyo fasahaadkooda aan la soo koobi karin, hadana dalku ma heysto wasaarad murtida iyo madadaalada koontrooli Marta iskaba daa rajo masraxiyad asluubeysan oo akhyaartu ku xusuusan karaan murtidii baaba,’day ee dhaqankii reer miyiga iyo kii dambe ee magaalooyinka Soomaalida.
Fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyay in ay 24-ka saac dhex fadhiyaan balwad, iyagoo aan jirkooda nuux nuuxin Karin oo dhibaato tabar yari ah heysato, Qaar ayaa daroogada ka ganacsada qaarna waxa ay xadaan qof kale howl uu ku dhibtooday.
Walow shacabka isaga dulqaataan ereyada dhaadheer iyo muusiqa Qiimo beelay ee Oorganka oo keliya laga tumo, hadana dadweynaha Soomaaliyeed weli waxa ay ka dhur sugayaan dowlad fan leh, iyo fanaaniin asluub leh.
DAAWO SAWIRADA FANAANIIN KU QUL QULAYA XAMAR: